YEYINTNGE(CANADA): ချင်းလူမျိုးစု ခရစ်ယာန်များအပေါ် နအဖ၏ ဖိနှိပ်မှု
ချင်းလူမျိုးစု ခရစ်ယာန်များအပေါ် နအဖ၏ ဖိနှိပ်မှု
စစ်ကိုင်း တိုင်း ကလေးမြို့နယ် နည်းပညာ တက် က သိုလ် (ကလေး) အနီး ရှိ ရပ် ဝေး ကျောင်းသား များ အဓိက ခြေချ ရာ ထိုမာ ကျေး ရွာ အုပ် စု သာယာဝတီ ရွာ ရှိ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် နည်းပညာ ကျောင်းသား များ ၏ အ ဆောင် တစ်ခု ဆောက် လုပ် ရန် စုဆောင်း ထား သော အိမ် ဆောက် ပစ်စည်း များ သို လှောင် ရာ မိုးကာ တဲ တစ် ခု ကို ကျောင်း ပိတ် ချိန်ကို အခွင့် ကောင်း ယူ ပြီး လူ ရမ်းကား တစု မှ သော့ ဖောက် ၀င် ရောက် ဖျက်ဆီး သွား ကြောင်း နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် ထို နေရာ သို့ ရောက် ရှိ ခဲ့ သူ ကျောင်းသား တစ်ဦး ထံ မှ သိ ရှိ ရ ပါ သည်။ ယင်း အဆောင် သည် အဆောင် နေ ကျောင်းသား များ ဘုရား ၀တ် ပြု ခြင်း များ ပြု လုပ် နိုင် ရန် နှင့့်် ရပ်ဝေး မှ လာ သော ဆင်းရဲ ခက်ခဲ သည့် ကျောင်းသား များ စရိတ်သက်သာ စွာ ဖြင့် နေထိုင် ကျောင်းတက် နိုင် ရန် ရည် ရွယ် ထား ခြင်း ဖြစ် သည်။
ယင်း အ ဆောင် ကို ဆောက် လုပ် နိုင် ရန်အတွက် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များ က သူး တို့ ၏ မုန့် ဖိုး ထဲ မှ ခွဲ ထုတ် စုဆောင်း ခဲ့ ကြ သည် မှာ ၉ နှစ် ကျော် ကြာ ပြီ ဖြစ် သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် မြေ ကွက် များ ၀ယ် ယူ နိုင် ပြီ ဖြစ် ရာ ယင်း နေရာ တွင် အုတ်မြစ် ကို လည်း စနစ် တကျ ချ နိုင် ခဲ့ သည်။ သို့ သော် ၂၀၀၆ နှင့် ၂၀၀၇ ခုနစ် များ ၌်အခက် အခဲ အ မျိုးမျိုး ကြောင့် ဆက်လက် မ ဆောက် လုပ် နိုင် တော့ ပေ။ ယင်း သို့ ဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ နေ. ၌ အုတ်မြစ် ပေါ် ၌တိုင် ထောင် ကာ ဆက်လက် ဆောက် လုပ် ခဲ့ ရာ ကလေး မယက ဥက္ကဌ ဥိး ကိုကိုလတ် ဦးဆောင် ၍ မ တရား တားမြစ် လာ သဖြင့် ဆောက် လက် စ ကို လက် စ မ သတ် တော့ ပဲ ချက်ချင်း ရပ် နား ခဲ့ ကြ သည်။ ယင်းကဲ့ ရပ် နား ခဲ့ သော် လည်း စစ် အစိုးရ အလိုကျ ပြုမူ လုပ် ဆောင် ကြ သည့် ကြံ့ဖွံ့ နှင့် စွမ်းအားရှင်လူမိုက် များ က ကျောင်းသား များ လုပ် အားဖြင့် ထောင် ထား သော တိုင် အား လုံး ကို ဥပဒေ မဲ့ လစု လူဝေး အားကူး ၍ အာဏာ ပိုင် များ ၏ မြောက် ပေး မှု ဖြင့် ဆွဲံလှဲ ပြီး တိုင်ထောင် ရန် ချ ထားသော သံ ဖိနပ် အုတ် ခုံ များ ကို လည်း ထုခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ ကြ သည်။ ထိုပြင် အိမ် ဆောက် ရန် နှစ် ရှည် လရှည် စု ဆောင်း ထား သော သစ် သား များ ကို သာယာဝတီ ဥက္ကဌ အိမ် သို့ နွား လှည်း ဖြင့် မတရား သဖြင့် သိမ်း ဆည်း သယ် ဆောင် သွား ကြ သည်။ အဆိုပါ အဖြစ် အပျက် နှင့် ပတ်သက် ၍ ကလေးမြို့ ဒကစ မှုး ထံ တိုင် ကြား ခဲ့သော်လည်း ယနေ့ တိုင် အောင် တရား မျှတ သည့် ဖြေရှင်း ချက် တစုံတခု မှ ထွက် မ လာ ခဲ့ ပေ။ ယင်း ကဲ့သိုံ ဖျက်ဆိး ခံ ရ မှု နှင့် ပတ်သက် ၍ မျက်မြင် ကျောင်းသား တစ် ဦး က ဖျက်ဆိး ခဲံ့ သည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး မှာ ကျပ် သိန်း ပေါင်း ၂၀ ကျော် ရှိ ကြောင်းပြော ကြား ခဲ့ ပါ သည်။
သို့ဖြစ်၍ ဖျက်ဆီး သိမ်းဆည်း မထား ပဲကျန် နေ ခဲ့ သည့် သစ်သား စ များ ကို ထိန်းသိမ်း သိုလှောင် ရန် မိုးကာ တဲ တစ်ခု ကို June6နေ့ တွင် ကျောင်းသား များ က ဆောက် လုပ် ခဲ့ ရာ ဦး ကိုကိုလတ် မှ ထပ် မံ တားဆိး လာ ပြန် သဖြင့် တဲ ကို အ ပြီး တိုင် မ ဆောက် ရ ပဲ ရပ် နား ခဲ့ ရ ပြန် ပါ သည်။ မိုးကာ တဲ ဆောက်လုပ် ခြင်း နဲ့ ပတ်သက် ၍ တာဝန် ရှိ သူ ကျောင်းသား တချို့ ကို ကျောင်း အုပ် ကြိး ကို ဖိအား ပေး ခြိမ်းခြောက် စေ ခဲ့ သည် မှ ကြံ့ ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင် စ သည့် စစ် အစိုးရ တုတ် ကိုင် များ နှင့် ကျောင်း သား များ ပြဿနာ မည် ကို စိုး၇ိမ် လာ သဖြင့် ဖျက်ဆီး ခြင်း များ မပြု ပဲ နေ ခဲ့ ရာ မှ ယခု လ အ တွင်း ဤ ကဲ့သို့ ပြု မူ လာ ခဲ့ ကြ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ယခု တကြိမ် ဖျက်ဆီး မှု နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ယင်း နေရာ သို့ ရောက် ရှိ သူ ကျောင်းသား တစ် ဦး က " တိုင် နှစ် ခု ကို ဓား နှင့် ပြတ် အောင် ခုတ် ထား တာ တွေ့ ရ တယ်။ တခြား တိုင် တွေ လည်း ခုတ် ထား တာ တွေ့ ရ တယ်။ ပြတ် အောင် တော့ မ ခုတ် ဘူး။ အပေါ် မှာ မိုး ထား တဲ့ မိုးကာ တွေ အ ကုန် ဆွဲ ဖြဲ ခံ ရ တယ်။ " ဟု ဆက်လက် ပြော ကြား ခဲ့ ပါ သည်။
"ရွာ သား တွေ မေး ကြည့် မယ် လုပ် တော့ မေး လို့ သိပ် မ ရ ဘူး။ ကျောင်းသား တွေ နဲ့ ပြသ နာ တက် မှာ ကြောက် တယ် ထင် တာ ပဲ။ ဘယ် သူ တွေ ဖျက်ဆီး တာ ၊ ဘယ် ချိန် မှာ ဖျက် တာ တို့ မ သိ ရ ဘူး ဗျ။ " ဟု ဖြစ် ပျက် ပုံ ကို ဆက်လက် ရှင်း ပြခဲ့ ပါ သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တွင် မြို့နယ် နှင့် ကျေးရွာ အာဏာပိုင် များ ပူးပေါင်း ဖျက်ဆိး သော အိမ် ဆောက် ပစ်စည်း တန်းဖိုး ကျပ် သိန်း ပေါင်း ၂၀ ကျော် နှင် စာ လျှင် ယခု ပျက်ဆိး မှု ပမာဏ မှာ မ ပြောပ လောက် ကြောင်း အဆိုပါ ကျောင်းသား ထံ မှ သိရှိ ရ ပါ သည်။
ယင်း အဖြစ် အပျက် များ ကို သုံးသပ် ကြည့် မည် ဆို ပါ က ဗိုလ် ချုပ် သာအေး၊ ဗိုလ် မှုးချူပ် ဟုန်းငိုင်း နှင့် ဗိုလ် မှုး ချုပ် ၀င်းမြင့် တို့ ၏ November လ ပထမ ပတ် တွင် သွား ရောက် ခဲ့ ကြ သည့် အ နှစ် နှစ် ဆယ် အတွင်း ပထမ ဆုံး အကြိမ် ဘာသာရေး ခေါင်း ဆောင် များ နှင့် တွေ့ ဆုံ ၍် ချင်းတောင် ဒေသ၏ ထောက်ခံ မှု ရ ရှိရေးအတွက ရွေး ကောက် ပွဲ အကြို စည်းရုံးရေး ခရိး စဉ် အတွင်း ဗိုလ် ချုပ် သာအေး မှ ဘာသာရေး ခေါင်ဆောင် များ အပေါ် ပြောဆို ဟော ကြား ခဲ့ သည့် သမ္မာ ကျမ်း စာ ထဲ မှ ခရစ်ယာန် ယုံကြည် မှု နှင် ဆိုင် သော ဘုန်းကြီး စာ ချ တရား များ သည် အ ပေါ်ရံ သက်သက် သာ ဖြစ် ကြောင်း ချင်းတောင် ခြေ ရှိ Technological University of Kalay ကျောင်း ရှိရာ သာယာဝတီရွာ မှ ကြံ့ဖွံ့ နှင့် စွမ်းအားရှင်လူမိုက် များ ၏ ဥပဒေမဲ့ ရမ်းကား သည့် အ ဖြစ် အပျက် များ က သက် သေ ပြ ခဲ့ ပြီ ဖြစ် သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/11/2009
(၈၉) နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ အထိမ်းအမှတ် ၀...
‘နံပါတ်ဝမ်း’ သန်းရွှေ ရဲ့ (ကိုယ်ရေးအကျဉ်း)
11 Nov ဒိုင်ယာရီ
FDB_e' bulletin_No 10/ 2009_
NLD အဖွဲ့ချုပ်မှ ကျင်းပခဲ့သော အမျိုးသားနေ့အောင်ပွဲ...
ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါက်တာဒေါ်တင်မိုးဝေတို့ ၏ (၅၀)နှစ်ေ...
Invitation to Venerable Ashin Kawwida’s 64th Birth...